အနာဂတျမှာ အမြိုးသမီးတှကေ အမြိုးသားတှကေို လကျထပျခှငျ့​တောငျးရနိုငျ – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတမြား > အနာဂတျမှာ အမြိုးသမီးတှကေ အမြိုးသားတှကေို လကျထပျခှငျ့​တောငျးရနိုငျ
လကျပေါကျ ပိတျတာနဲ့ ကြဲတာက ဘာတှဖွေဈတတျသလဲ ဘာတှကှောခွားနိုငျလဲ….
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်က ထိုင်းနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့ (၅) နှစ်ကြာ လက်တွဲခဲ့တဲ့ ချစ်သူကောင်လေးကို လက်ထပ်ခွင့် တောင်းခဲ့ပါတယ်။
တချို့သော အမျိုးသမီးတွေကတော့ ဒါဟာ အမျိုးသားတွေဆီကနေ လက်ထပ်ခွင့် တောင်းသင့်တယ်လို့ ယူဆထားကြပေမယ့် တချို့ အမျိုးသမီးတွေ ကျတော့လည်း ချစ်ရင်ဘာမှ တွေးနေစရာ မလိုဘူး၊
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က အမျိုးသားတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ခွင့် တောင်းသင့်သလား
ယခုခေတ် အချိန်ကာလမှာသာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်လို့ လက်ထပ်ကြပေမယ့် ရှေးယခင်ခေတ်တွေမှာ အမျိုးသမီးတွေက သဘောတူညီမှုတွေအတွက် လက်ထပ်ခဲ့ကြရပါတယ်။
နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ချစ်ကြည်ရေးတွေ ရဖို့အတွက် အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ မပေါင်းဖက်ရပဲ ပေးစားတဲ့သူနဲ့သာ ယူခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ တော်တော်ကို ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းတဲ့ကိစ္စပါပဲ။
ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ဝေးပြီးတော့ မချစ်တဲ့သူနဲ့ အတင်းနေရတာဟာ အရမ်းကို ပင်ပန်းဆင်းရဲ လွန်းလှပါတယ်။ ၁၈ ရာစုနှောင်းပိုင်းအထိ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ရွေးချယ်ခွင့် မရှိခဲ့ပါဘူး။
ခေတ်တွေ ဘယ်လိုပဲ ပြောင်းလဲပြောင်းလဲ အမျိုးသားတွေကတော့ လက်ထပ်တာဟာ သူတို့အလုပ် ဖြစ်ပြီးတော့ အမျိုးသမီးတွေက ဒီလို နေရာတွေမှာ ဘာမှမဆုံးဖြတ်၊ မစဉ်းစားတတ်ဘူးလို့ တွေးထားကြပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးသမိုင်းနဲ့ ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်း ဘယ်လောက်ဝေးဝေးကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြသလဲ ဆိုတာကို တွေးတောကြည့်မယ် ဆိုရင် လူတွေဟာ ကျားမတန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးကို ဦးစားပေးသင့်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အမျိုးသားတစ်ဦးက လက်ထပ်ခွင့် တောင်းနိုင်သလို အမျိုးသမီးကလည်း အမျိုးသားကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အမျိုးသမီးတစ်ဦးက လက်ထပ်ခွင့် တောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေဦးမယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။ သူ့အသိုင်းအဝိုင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ မိသားစုတွေက လက်ခံနိုင်မလား ဆိုတာကို ထည့်စဉ်းစားရပါဦးမယ်။
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဟာ မတူညီတဲ့အတွက် စဉ်းစားစရာတွေကလည်း အမြဲတမ်း လိုက်မတူညီနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တကယ် ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ လက်ထပ်လိုက်ပါ။
သင်ရော လက်ထပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ နှစ်တွေအကြာကြီး တွဲလာတာနဲ့ လက်ထပ်ဖို့အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီလို့တော့ တွေးလို့မရပါဘူး။ ငွေရေးကြေးရေး တည်ငြိမ်မှု၊ အလုပ်အကိုင် တည်ငြိမ်မှုနှင့် အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်စတဲ့ အချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် လက်ထပ်ဖို့အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား ဆိုတာကို နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ သေချာလေး တိုင်ပင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေး တာဝန်တွေကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်နိုင်မလား ဆိုတာနဲ့ အခြားတာဝန်တွေ၊ အခန်းကဏ္ဍအသစ်တွေ အများကြီး တိုးလာမှာပါ။
တကယ်လို့ အိမ်ထောင်မပြုသေးဘူး ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်တွေကို သိပ်တွေးစရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့စိတ်တူကိုယ်တူ ဝါသနာတူတဲ့သူကို ရှာဖွေပြီး ပေါင်းဖက်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အိမ်ထောင်ရေးဟာ အမြဲတမ်း အတက်အကျရှိနိုင်ပြီးတော့ စိတ်ထင်ရာတွေလည်း လိုက်မလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။
သင်ဟာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်ပြီးတော့ ကျန်ရှိနေတဲ့ဘဝကို တူတူဖြတ်သန်းသွားမယ်လို့ စဉ်းစားထားရင်တော့ အရာရာကို သည်းခံတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးအတက်အကျတွေကို တူတူဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ကိုရထားရင် သင်ဟာ ကံအကောင်းဆုံးလူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးဘက်က လက်ထပ်ခွင့်တောင်းမယ် ဆိုရင် သူဘယ်လိုလူမျိုးလဲ ဆိုတာကို သေချာလေးရွေးပြီး စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆက်ဆံရေးတွေဟာ ဒိုင်းနမိုက်တစ်ခုလို ဖြစ်နေလို့ မရပါဘူး။ သင်တန်ဖိုးထားရတဲ့လူဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ ဆိုတာကို သေချာလေးထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။
သူနဲ့ကိုယ်က အမြင်တူလား ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဘာလုပ်လုပ် အပြစ်ပြောနေသူလား၊ အကောင်းမြင်မလား၊ အဆိုးမြင်မလား ဆိုတာကို သေချာလေး တွေးသင့်ပါတယ်။ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို နှစ်တွေအကြာကြီး တွဲလာတာနဲ့ လက်ထပ်လို့ မရပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ရဲ့စိတ်ကို သင်အသိဆုံးပဲဖြစ်မှာပါ။
နောက်တစ်ဖက်မှာလည်း အိမ်ထောင်ပြုတယ် ဆိုတာဟာ သင်တို့နှစ်ယောက်ကို ပေါင်းစည်းစေပြီးတော့ ဘဝလမ်းကို တူတူလျှောက်လမ်း ခိုင်းတာပါပဲ။ အလုပ်တွေဖြစ်မြောက်စေဖို့၊ တစ်စုံတစ်ခုကိုဝယ်ဖို့၊ သင့်လိုအပ်ချက်တွေနှင့် လိုလားချက်တွေကို အချင်းချင်း တက်တက်ကြွကြွ ဆက်သွယ်ပြောဆိုသင့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတို့ရေ သင်ဟာ လက်ထပ်လို့ရမယ့် အရွယ်လဲရောက်လာပြီ။ သူကလဲ ကိုယ့်ကိုချစ်သလို ကိုယ်ကလဲ သူ့ကိုချစ်တယ်။ နားလည်မှုတွေရှိပြီး သည်းခံမယ်။ သင့်ကိုတစ်ဘဝလုံး ဂရုစိုက်နိုင်မယ့် အမျိုးသားဆိုရင်တော့ တန်းသာလက်ထပ်ခွင့် တောင်းလိုက်ပါ။ ဘာမှတွေဝေမနေပါနဲ့။
အခုက ၂၀၂၂ ခုနှစ်ရောက်နေပါပြီ။ နေရာတိုင်းမှာလည်း အမျိုးသမီးတွေက ဦးဆောင်နေပါပြီ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို လိုက်နာဖို့ မလိုပါဘူး။ လူ့အဖွဲ့အစည်းက သင်ဖြစ်သင့်တာကို လိုက်ပြီး ပြောနေစရာ မလိုပါဘူး။ သင်ဖြစ်ချင်တာကို သင်ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ရမှာပါ။
သင်က သင်လိုချင်တာကို လုပ်နိုင်သလို ကိုယ့်ဘဝကိုယ် တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ သန်မာတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့် သူများတွေနဲ့ မတူနေမှာကို မကြောက်ပါနေပါနဲ့။ သင့်လက်တွဲဖော်ကို တခြားသူတွေထက် ပိုချစ်တယ်ဆိုတာကို ပြသဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။
Credit- Zombie lovemedia
Previous Article သငျရဲ့ နာမညျမှာ ”K” ပါခဲ့သျော….
Next Article ဒီစာကိုသာ ဆုံးအောငျဖကျလိုကျပါ တုံးအတဲ့ ယောကျကြားနဲ့ ထကျမွကျတဲ့ ယောကျကြားခှဲနိုငျပါလိမျ့မယျ ညီမလေးတို့..